Dochie Live Gị Replic 'ialkpọ oku Ihe na Live Mkparịta ụka | Martech Zone
Mechie ekwentị ijide ekwentị megide ndabere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Ruo ọtụtụ iri afọ, ọkpụkpọ oyi abụwo ihe na-egbochi ịdị adị nke ọtụtụ ndị ahịa, ebe ha na-eji ọtụtụ awa na-anwa ịme ka mmadụ na ekwentị ghara ịlaghachi. Ọ bụ ezighi ezi, siri ike ma bụrụ nke a na-ejighị n'aka. Agbanyeghị, ebe ọ bụ na enwere mmekọrịta dị n'etiti ọnụ ahịa ọpụpụ na ọnụ ahịa otu emechiri emechi, ịkpọ oku oyi bụ ajọ ihe dị mkpa maka ọpụpụ taa ma ọ bụ n'ime ndị ahịa ahịa.
N'ezie, ndị na-ere ahịa enweghị ike ịdabere na netwọkụ ha nwere ịchụpụ ahịa ndị ahụ, ọ dịkwa mkpa ka e nwee usoro maka ha ịbanye n'ahịa ndị a na-emeghebeghị ma ọ bụ ọdọ mmiri na-atụ anya. Mana, dị ka ọrụ ọ bụla, enwere ọrụ ndị ahịa gị ga - etinye oge na ndị ọzọ na - anaghị eji oge ha eme ihe.
Akụkụ nke Oku Oyi
Ọ bụ ezie na ọkpụkpọ oyi bụ ihe ọjọọ dị mkpa na usoro ahịa ahụ, ọ pụtaghị na ndị na-ere ahịa gị kwesịrị ijikwa akụkụ ya niile. E nwere ụzọ ihe atọ iji kpọọ oku oyi:
Ndepụta Okike: Nke a gụnyere ikpokọta, ịkwado, na ihichapụta ndepụta olile anya maka ndị nnọchite ahịa gị na-apụ apụ.
Ịkpọ oku: Ihe arụ ọrụ nke ịkpọ oku, nke gụnyere ịmekọrịta ekwentị, ịgwa ndị nche ọnụ ụzọ okwu na ịnyagharị usoro akpaaka.
mmechi: Nke a akụrụngwa na-elekwasị anya naanị na leveraging na ndụ mkparịta ụka na olile anya ime ka zuo.
N'ime ihe atọ a, o doro anya na ọrụ kachasị mkpa maka ọpụpụ ma ọ bụ n'ime ire ahịa kwesịrị ịbụ mmechi.
Hapụ mkparịta ụka banyere ndepụta ndị nwere atụmanya, ịpị ekwentị bụ otu n'ime ọrụ na-adịghị arụpụta ihe maka ndị na-ere ahịa. Chee echiche oge ole ha na-etinye na ịkpọ oku na akara nọmba mgbe ha nwere ike ilekwasị anya n'ihe ha kacha arụ: ire ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọrụ gị.
N'ezie, ọ na-ewe oku 21, na nkezi, iji mepụta otu mkparịta ụka ndụ, na ndị na-ere ahịa na-akpọ oku 47 kwa ụbọchị.
Ọtụtụ arụpụtaghị ihe furu efu site n'inwe ndị na-ere ahịa gị ga-ahụ maka ịkpọ oku na ịgagharị osisi ekwentị na-enweghị ngwụcha. Gịnị ma ọ bụrụ na ndị na-ere ahịa ahịa gị agaghị akpọ ma ọlị mana ha ka na-enwe mkparịta ụka ndụ?
Gịnị bụ otu ialkpọ oku?
Ọ bụghị ihe nzuzo na ọtụtụ azụmaahịa na-enye ọrụ dịgasị iche iche na azụmaahịa ha, yabụ gịnị kpatara ịkpọ oku ga-eji dị iche?
Otu ọkpụkpọ na-enye ndi ahia ahia ndi na akpo oku ka ha jikoo ndi ahia gi na ndi n’eme nkpa na oge, n’enweghi oku. Ọ bụ dị iche na nhọpụta ọnọdụ n'echiche na ndị ọrụ ahụ abụghị ọrụ maka ịmụ banyere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị; ha bụ naanị ọrụ maka isoro ndị nche ọnụ ụzọ na-ekwurịta okwu, ịgagharị ngwa ekwentị ndị ahụ, wdg.n'ihi na ha nwere ike ijikọ reps gị na onye na-eme mkpebi, na-enye mkparịta ụka ndụ na atụmanya ahụ.
Igwe ndi mmadu bu ihe omuma, ngwa ngwa ma di mfe, ma na enyekwa uru di egwu. Ọ bụrụ n ’ụlọ ọrụ na-akpọ oku enweghị ike ijikọ ya na onye na - eme mkpebi, ha gafere na nke ọzọ ebe ị na - ere pịpị na - apụ apụ naanị mgbe mkparịta ụka dị ndụ dị njikere. Enwere nsonaazụ doro anya, yana nghọta banyere oku ole akpọrọ, ole mkparịta ụka enwere na ọnụego njikọ.
Dochie mmemme ịpị nke ndị nnọchi anya gị na mkparịta ụka ndụ site na itinye ego na a ọrụ ịpị otu egwuregwu. MonsterConnect, onye nkwado anyị kachasị ọhụrụ, na-akpọ oku 150-200 na mkparịta ụka ndụ 8-12 na ndị na-eme mkpebi kwa elekere, na-enye oge 40 mma karịa na azụmahịa ndị ọzọ emechiri.
Rịọ nyocha nyocha n'efu ma ọ bụ ngosi nke ọrụ ịkpọ oku otu MonsterConnect taa:
Free Prospecting Nyocha Rịọ a ngosi